दशैंको खाना के कसरी खाने सोचिरहनु भएको छ ? यी पाँच समूहका आहार समावेश गर्नु उचित | Hamro Doctor News
दशैंको खाना के कसरी खाने सोचिरहनु भएको छ ? यी पाँच समूहका आहार समावेश गर्नु उचित
By अञ्जु पन्थी, आहार विशेषज्ञ
नेपालीहरुको महान् चाड दशैं हाम्रो घर–आँगनमा छ । आज फुलपाति भित्र्याइँदैछ । विषेगरी अष्टमीका दिन बलि दिने भनिएपनि दशैंमा मिठो खाने क्रम चलि नै रहेको छ । यो चाडमा कस्ता परिकार खाने, कस्ता पेयपदार्थ खाने र कसरी पर्वलाई रमाइलो बनाउने भनेर योजना बनाउन थालिसकेका छन् ।
नेपालीमध्ये पनि हिन्दू धर्मावलम्बीले दशैँलाई निकै महत्वका साथ लिने गर्छन् । दशैँका अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घरको पूजाकोठामा राखेको जमरामा खसी, बोका, हाँस, कुखुरा, राँगा आदिको बलि दिने गर्छन् । उक्त बलिलाई प्रसादको रुपमा उनीहरूले ग्रहण गर्ने गर्छन् । दशैँमा जस्तोसुकै आर्थिक हैसियत भएका मानिसले पनि क्षमताअनुसार मीठो–मसिनो खानेकुरा र मासुको जोहो गर्छन् । त्यही भएर पनि यो चाडलाई ‘मीठो खाने र रमाइलो गर्ने’ पर्वको रुपमा लिइन्छ । दशैँको अर्को रमाइलो पक्ष भनेको राम्रो र नयाँ लुगा लगाउने पनि हो । साथै कतिपयले दशैँमा लामो समय बिदा हुने हँुदा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, आराम गर्ने सूची पनि बनाएका हुन्छन् ।
चाडपर्व भन्नासाथ खानपानकै कुरा बढी आउँछ । दशैँमा मात्रै नभई अन्य चाडमा पनि हामी अव्यवस्थित तरिकाले खानपान गर्छौं । जुन गलत हो । सन्तुलित आहार नभए चाडबाडमा दुःख पाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । स्वस्थ र निरोगी हुनको लागि सन्तुलित आहार अनिवार्य छ । आवश्यकताअनुसार खानेकुरा खाए मात्रै शरीर स्वस्थ र तौल यथोचित रहन सक्छ । सन्तुलित आहारमा पाँच समूहका खानालाई मिलाएर खानुपर्छ ।
♦ तरकारी र गेडागुडी समूह
♦ माछा, मासु, अण्डा अथवा गेडागुडी समूह
♦ दूध अथवा दूधबाट बनेका परिकारका समूह
♦ फलफूलका समूह
कसले कति खाने ?
एउटा वयष्क मानिसले खाना कति मात्रामा खाने भनेर उसको उमेर, लिङ्ग, उचाइ, जीवनशैली, शारीरिक परिश्रमअनुसार फरक हुन्छ । मासुमा प्रोटिन र बोसोको मात्रा धेरै हुन्छ । हाम्रो शरीरको लागि एक दिनमा ५० देखि ६५ ग्राम प्रोटिन आवश्यक पर्छ । प्रोटिनले शरीरको वृद्धि र विकास गर्छ ।
दशैँमा हामीले धेरै मासु सेवन गर्छौं । यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा अवश्यकताभन्दा बढी प्रोटिन जम्मा हुन्छ । प्रोटिनको मात्रा बढी हुँदा कलेजो र मृगौलालाई अनावश्यक दबाब पर्छ र तिनीहरूमा हानि पुग्न सक्छ । दशैँमा प्रत्येकको घरमा प्रशस्त मासु हुने हँुदा त्यसलाई स्वास्थ्यमा असर नगर्ने गरी बनाउनुपर्छ । चलनचल्तीअनुसार हामीले कवाफ लगाएर मासु बनाउँछौं । कवाफ लगाउँदा धेरै तेल राखेर अझ मीठो पार्ने कोशिश गर्छौं । यसो गर्नु गलत हुन्छ ।
हाम्रो शरीरलाई दैनिक १० देखि २० ग्राम बोसो भए पुग्छ । छाला र बोसोमा चिल्लो पदार्थको मात्रा धेरै हुन्छ । मासु पकाउनुअघि नै छाला र बोसो हटाएमा सो मासु खान स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । तेलको मात्रा कम प्रयोग गर्ने र सकेसम्म घिउ नराख्दा नै स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । तेल पनि सकेसम्म तोरीको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । चिल्लोले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसेराइड बढाउँछ ।
गुलियो कति खाने ?
दशैँको अवसरमा धेरै दिन बिदा हुने हुँदा अधिकांश मानिस घरमै रमाइलो गर्ने गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले पेयपदार्थ र मदिराको साथ पनि लिन्छन । पेयपदार्थ (कोल्ड ड्रिंक्स) मा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । १ गिलास (२५० एमएल) कोकमा २७ ग्राम चिनी हुन्छ । एक दिनमा चिनीको मात्रा जसमा क्यालोरिको १० प्रतिशत अथवा २० ग्राम चाहिन्छ । चिनीको मात्रा धेरै प्रयोग गर्नाले मधुमेह हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । मदिराको सेवनबाट उच्च रक्तचाप, कलेजोमा खराबी तथा क्यान्सरजस्ता रोग लाग्न सक्छ ।
फलफूल धेरै, नून कम खाने
यस्तो बेलामा फलफूल र तरकारी दिनमा ५ सय ग्रामभन्दा बढी खानुपर्छ । दशैँमा थोरै मासु तर सागपात, मुला, काँक्रो, गाजरजस्ता तरकारी र फलफूल बढी प्रयोग गरेमा विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ । तरकारी र फलफूलले उच्च रक्तचाप घटाउने, मुटुरोग कम गर्ने, केही क्यान्सरलाई कम गर्ने र पाचन प्रणाली बलियो बनाउने हुन्छ ।
यस्तै नूनको प्रयोग सकेसम्म कम गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । मासु र अचारमा नूनको मात्रा बढी हुने गर्छ । एक दिनमा ५ देखि ८ ग्राम (एक चिया चम्चा) नून सेवन गर्नुपर्छ । नूनले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई असर गर्छ ।
युरिक एसिडका बिरामीले रातो मासु नखाँदा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ । कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसेराइड बढी भएका बिरामीले सेतो मासु जस्तै– छाला हटाएको कुखुराको मासु, छाला हटाएको माछा खानुपर्छ । यसले शरीरलाई आवश्यक मात्रामा प्रोटिन प्रदान गर्छ ।
व्यायाम गर्न नभुलौं
दशैँमा धेरै दिन बिदा हुने भएकाले मानिसहरू घरैमा बसेर खाने, तास खेल्ने, टिभी हेर्ने, चङ्गा उडाउने गर्छन् । कतै जानु परे पनि सवारीसाधनको प्रयोग गर्छन् । सकेसम्म हिँडडुल गर्दैनन् । शारीरिक व्यायाम पनि गर्दैनन् । बिहानै उठेर १० हजार पाइला पसिना निकालेर हिँडेमा खाएको खाना पचाउन मद्दत पुग्छ । धेरै खाएर आराम गर्दा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न सक्छ । यसकारण चाडबाड भए पनि व्यायाम गर्न नभुलौं ।
Last modified on 2019-10-06 09:56:49
घुर्नु सामान्य रोग होइन यो दीर्घरोग हो
पाठेघरको मुखको क्यान्सर: जानौं कारण र जोगिने उपाय
नाकको एलर्जी : बेवास्ता नगरौं, दम होला